Ozi bara uru maka onye ọ bụla | ndi nāju ihe-ọmuma, ndi akpiri nākpọ kwa nku nku nku! - Nkebi nke 2
Emehie ise mgbe ị na-echekwa nduku
Ihe na 24.09.2019 24.09.2019
Ọ bụ ya mere na a na-akpọ nduku nri achịcha. Ọtụtụ ezinụlọ na-echekwa ma ọ dịkarịa ala akpa akpa nke akwukwo nri a na-atọ ụtọ maka oge oyi. Kedu mmejọ a ga-ezere ka nduku nwee obi ụtọ na uto ya dị mma ruo mgbe owuwe ihe ubi na-esote? ...
Etu ị ga-esi mee ka mmekọrịta dị anya
Mmekọrịta n’ebe dị anya ọtụtụ na-eche na ọ gaghị ekwe omume, mana ihe ị ga-eme mgbe ịhụnanya gị dị anya n’ebe ị nọ. Ihe isi ike dịdịrị ndị bikọtara ọnụ, mmekọrịta dịkwa na anya.
Mmanụ a withụ na galiki na galị - dil
Ihe na 22.09.2019 22.09.2019
N'adịghị ka zucchini, zukini nwere agba ojii na denser karị, anụ ahụ na-enwe ọ juụ karịa. N’ime ụdị ịgba, ọtụtụ ndị na-enwe mmasị na zucchini karịa - ha na-agbanye ike ma nwekwaa nkụ. Olee otú ...
Ose e ghere eghe bụ ezigbo nri!
Ose ndị dị mma na-adị oke mma ma dịkwa ka nri, yana dịka ngwa nri ndị ọzọ. You nwere ike iji ha na salads oyi, nri anụ, maka ime sauces. Ose na-ekpo ọkụ na ...
Akwukwo Egg Pickled - Stuffed
Ihe na 20.09.2019 20.09.2019
N'ime usoro Ezi ntụziaka niile maka eggplant, m na-enwe mmasị na nke a. "Ụgbọ mmiri" a tụkọtara jupụtara na ngwakọta na-esi ísì ụtọ na oseose, ha na-enwe ihe ịga nke ọma na tebụl. N'ihi na ọtụtụ ndị nwunye, ụdị eggplant uzommeputa ga-mara. ...
Adjika Ntụziaka na Provencal herbs - Spicy Yummy
Onye o bula riri ihe omuma a na –aghi adi nma ma obu nke na adighi adi nma ogaghi abanye ulo ahia maka oge. Esinyere ya dika udiri nri a si di nma! Esi nri sizinin.
Inye ihe eji esiji “anyịnya
Kacha ewu ewu na nduku eji eji ejiji na Russia. A na-eji anụ ọ bụla, abụba anụ a mịrị amị, anụ ezi esiri esi, anụ a na-egbu egbu. Gịnị nwere ike ịdị ụtọ: otu iberibe achịcha rye, ibe mpe nke anụ ezi, na n'elu ihe a…
Yabasị na-akụ eghe - a super uzommeputa maka biya!
Ihe na 18.09.2019 18.09.2019
Mpekere yabasị bụ ihe na-atọ ụtọ, ihe ịchọrọ mgbe ndị enyi bịara biya. Na-atọ ụtọ, ọ dịghị njọ karịa ibe. N’agbanyeghi na esiri ya n’ite buru ibu, ha adighi aru ojoo dika…
Redcurrant Jam Nkeji ise
Ugbo a bụ ihe na-akpata ascorbic acid na ọtụtụ vitamin ndị ọzọ dị mkpa maka iji nwekwuo ihe mgbochi na oge oyi. Otutu nke osisi a ga-eji acha uhie uhie ga-abụrụ gị uru. Tomato na ya ...
Pickled Squid Recipe
Ọtụtụ ịhụnanya squids na Ezi ntụziaka na ha. Usoro nri a bara ụba na protein na mineral, nke dị mkpa maka ezi ahụike na ndụ ogologo. Squid squid bụ nri nri na-atọ ụtọ, site na ...
Etu esi esi nri chiiz croquettes
Croquettes - efere nri nri French. A sụgharịrị pụtara "nkụ, kpachapụ anya." Ngwa ahụ bụ obere bọọlụ e mere na ngwaahịa dị iche iche, wee ghee ya n'ọkụ ma sie ya ike. Agachawo croquettes dị ụtọ ...
Cutlet turkey kachasị ụtọ
Ihe na 17.09.2019 17.09.2019
Turkey, dị ka ị si mara, bụ ezigbo nri na-eri nri. Can nwere ike ịmalite iri ya site na nwata. A na-atụ aro ka anụ Turkey nweta ihe oriri na-edozi oke na oke ibu, ọbara mgbali elu, na agadi. Ọ gaghị esi na ya ...
Oseose cucumbers maka oge oyi na tarragon - uzommeputa
Mara mma, siri ike, nke ukwuu na crispy na nnọọ keisi ekele tarragon. Vegetables ga - enweta akwụkwọ nri dị otú a na tebụl ma ọ bụrụ na ị kwadebe dịka uzommeputa ndị a. Ngwakọta (10 l; oge 1,5 h) - Ntụziaka maka cucumbers canning ...
Ntụziaka maka okroshka na soseji na mmiri mmiri
Okroshka bu ihe anyi nile! Ngwongwo ihe omuma na nke azụmahịa nke ihe oriri Slavic. Omenala, Russian okroshka na achịcha kvass. Ma mgbanwe ndị ọzọ nke uzommeputa a na-ewu ewu - na kefir, kukumba kukumba, whey na ọbụna ...
Ronald McDonald - Mascot nke McDonald
Ọnye na-bụ Ronald MacDonald? Nke a bụ onye mara mma nke bụ mascot nke ụlọ ọrụ ụwa ama ama McDonald. Dabere na nyocha emere na 2001 site n'aka ndị dere akwụkwọ Fast Food Nation, Ronald MacDonald (lee foto dị n'okpuru) dị ...
Aha akwa aha: ọkwa. Akwụkwọ ndị dị mma na logos ha
Taa, a na-anụ aha ndị ama ama ama. Anyị maara anyị ma anyị echeghị n'eziokwu na mmadụ cheburu aha ndị a, kedụ ihe ga - eme ha ...
Ònye bụ onye mmepụta ihe nkiri?
Ihe na 15.09.2019 28.10.2019
Mepụta ụlọ ọrụ bụ otu n'ime ụlọ ọrụ kachasị ewu ewu na mba anyị. Justnye na-adịghị akpọ onwe ya onye mmebe: na-amalite site siri mmepe mmepe web na-ejedebe na ndị isi manicure nna ukwu. Agbanyeghị, ihe kachasị na…
OBEY: Gini bu udi a ma gini bu akuko nke okike ya?
Na-achọ ịnọpụ iche mgbe niile. N'agbanyeghị oge afọ na ihu igwe na-abụghị windo, enwere ọchịchọ ịchọ mma. N'otu oge ahụ, achọrọ m uwe na ngwa ọ bụghị naanị ịbụ ...
Uru nke mgbasa ozi n'ịntanetị karịa ụdị mgbasa ozi ndị ọzọ
Kwa ụbọchị, ndị mmadụ na-etinye ọtụtụ awa na Internetntanetị, na-edozi nsogbu ọrụ na ndụ ha. Ndị na-ege ntị na-etolite mgbe niile, ma na ọnụ ma ikike: ndị na-eto eto, ndị ntorobịa, ndị tozuru oke na ndị nwere nnukwu ego ...
Zụghachi azụ - gịnị ka ọ bụ? Ardị agbapụta azụ
Ọ na - eme na mgbe ị gara na saịtị ahụ ka oge ụfọdụ gachara, mgbe ị na - arụ ọrụ na ntanetị ọzọ, mgbasa ozi na - egosi ngwa ahịa na ọrụ nke onye ọrụ ahụ lere. Etu esi elele ya: ukem ini ma obu ịchụso? Mba…
Previous Page Page 1 Page 2 Page 3 ... Page 10 273 Next Page
Ajuju 16 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 1,653.